Sidee caafimadkaaga u waxyeeleyn kartaa cuntada aadka loo warshadeeyay | Biyoguurenews.com
Home Wararka Sidee caafimadkaaga u waxyeeleyn kartaa cuntada aadka loo warshadeeyay
Sidee caafimadkaaga u waxyeeleyn kartaa cuntada aadka loo warshadeeyay
Daraasado cusub oo laga kala sameeyay Faransiiska iyo Spain ayaa muujinaya in cuntooyinka aadka loo warshadeeyay ay caafimad darro u horseedi karaan banii’aadanka ama gabow degdeg ah ama geeri.
Sababta cuntooyinka loo soo warshadeeyo waxay tahay in muddo ay cuntadaas raagto si aysan dhadhankeedu u baddalmin
Markasta eeg warqadda ku dhegan sheeyga, haddii maadooyinka laga sameeyay cuntadaas ay badanyihiin, kana badanyihiin shan sheey, waa astaan kuu muujin karta in cuntadan aad loo warshadeeyay, sida uu qaboProfessor Maira Bes-Rastrollo, oo ah La-Qore daraasadda Spain ee kor ku xusan.
Maaddooyin aadan aqoonsanin kuwa ay yihiin waxaa laga yaabaa in ay yihiin maaddooyin kiimiko ah lagu dheereynayo cimriga sheeygaasi si uusan u halaabin. Badankood waa kuwa badqaba, balse waxaa jira kuwa halistoodu badantahay. i
Iska eeg xadka ama cabbirka lagu xusey qoraalka ee waxyaabaha uu sheeygaasi ka samaysanyahay, tusaale haddii dufanka iyo sokorta ku badanyihiin. Waxaa taas kuusii muujin kara midaba (guduud) oo muujinaya badnaansho, (guduud xigeen) dhexdhexaad iyo (cagaar) oo muujinaya inyar.
Previous articleGabdhaha Congress-ka : Dabinka Trump yaan lagu dhicin
Next articleFaceApp : Sideed u ekaan kartaa 60 sanno kadib?Culimada Islaamku Maxayse Ka Tidhi